JUNE&MAY: သားလေး နဲ့ မေမေ
Posted by JuneOne at 11:01 PM
ကိုရေတမာ September 4, 2009 at 11:58 PM
ဟားဟား ရမယ်ရှာတာ ဖိုးသားလေးကို အကြောင်းပြပြီးးP
ဖိုးသားလေးပုံမြင်လို့ ၀င်လာတာ။ တကယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်
kaungkinpyar September 5, 2009 at 12:04 AM
ဟွန်းနော် spa သွားချင်တာ သားသားလေးကို အကြောင်းပြတယ်ပေါ့လေ၊
မေမေက မေမေပါ ကွယ်၊ ဒီက လူတွေ ကလေးချီတာ တွေ့တိုင်း အဲ့လို ထင်နေကြတာလား မသိဘူးနော်၊ ခက်လိုက်တာ
မီယာ September 5, 2009 at 1:27 AM
ကျော့က ကလေးအမေနဲ့ မတူဘဲ အပျိုလေးနဲ့ တူနေလို့ ဖြစ်မှာ ... spa သွားပြီး လန်းဆန်း အမောပြေသွားရင် ဒီထက်တောင် နုပျိုနေဦးမယ် :) သားလေးကတော့ တကယ် ချစ်စရာကောင်းတယ်။
Ko Paw September 5, 2009 at 9:07 AM
ဟုတ်သားပဲ.... ကလေးက ချစ်စရာလေးကိုး။
တက္ကစီသမားပြောတာ လွန်သလားဆိုတာ သေချာအောင် အမေဓါတ်ပုံကိုလည်း အပြေးအလွှား ကြည့်လိုက်ရသေးတယ်။ လွန်တယ်... ဒီလူ။ (လမ်းမှာ တွေ့ရင် မုန့်ဝယ်ကျွေးရမယ်)။း-)
Thet htar September 5, 2009 at 11:30 AM
hi sis dont worry and dont care :D
Vista September 5, 2009 at 11:48 AM
ကလေးကတရုတ်လေးနဲ့ တူလို့ ပါ ဟိဟိ
Rita September 5, 2009 at 2:34 PM
မမီယာပြောသလို မအိုသေးတဲ့သူ အပျိုလေးနဲ့တူလို့ မှတ်လိုက်ပါလေ။
သားသားကတော့ ရောက်လေရာမှာ မျက်နှာပွင့်တယ် ထင်တယ်။
ThuHninSee September 5, 2009 at 3:11 PM
ဟုတ်ပါတယ်.. မမီယာပြောသလိုပါ။း)
ဖိုးစိန် September 5, 2009 at 9:52 PM
ခုတည်းက သားသားက မျက်နှာပွင့်နေပြီးနော်...
Ko Boyz September 6, 2009 at 4:58 AM
Bleaching Powder အကောင်းစား သုံးပါ။ သိမ်ကြီးဈေးက ရောင်းတာတွေ မဝယ်ပါနဲ့ သူက အက်စစ်ပါတယ်။
Spa မသွားပါနဲ့။ ဗြူတီဆလွန်း သွားပါ။
စင်ကာပူက Spa တွေက နာမည်ခံပြီး နောက်ကွယ်မှာ မဟုတ်တရုတ် လုပ်နေတာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါတယ်။
အမည်မဖော်တာပဲ ကောင်းပါတယ်လေ။ :)
Same thing happen to me also. My son look like chinese. So they thought I'mamaid. ha...ha..ha...
The Queen September 7, 2009 at 12:30 PM
ဒီပို့စ် ကိုဖတ်ပြီး နောက်တခါ ကလေးနဲ့ အပြင်ထွက် ရင် သတိထား ဖို့ ဆင်ခြင်မိ တယ်
Myatag September 7, 2009 at 2:00 PM
Ma......2ther ka so cute koe ma yae...no need to go spa par..ma le hla tar be...
Myatag September 7, 2009 at 2:01 PM
စိမ်း... September 8, 2009 at 8:53 PM
သားလေးက တကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်... အစ်မ..
သားက အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်။ မိဘကွေကို အားကျတယ်။
khin oo may September 10, 2009 at 5:28 PM
mae September 11, 2009 at 2:55 AM
သားသားက ချောလို့ပါ.. အဲ့လိုပဲ နှစ်သိမ့်လိုက်
တို့လဲ အမေက တရုတ်ရုတ်နဲ့ဆိုတော့ အိမ်တံခါးဖွင့်ရင် အိမ်ရှင်ဘယ်မှာလဲ လို့ အမေးခံရတယ်၊ ဘဝတူ